Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Hoteelada & Dalxiisyada » Sandals Emerald Bay wuxuu martigeliyay Korn Ferry Golf Tour 2022 wuxuuna ku dhawaaqay Dhacdooyin Cusub 2023
Lahaanshaha sawirka Sandals Resorts
Boqol iyo soddon iyo laba golfer oo xirfadleyaal ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan ayaa ku dubay cagaarka iyo buluugga Great Exuma intii lagu jiray Bahamas Great Exuma Classic ee Sandals Emerald Bay, oo la qabtay Janaayo 13-19. Ku soo noqoshada qaybteedii shanaad, dhacdadii PGA TOUR ee la fasaxay ayaa furtay jadwalka 2022 Korn Ferry Tour waxayna calaamadisay dalxiiskii ugu horeeyay ee caalami ah tan iyo 2020.
Ka soo horjeeda gadaasha biyaha buluuga ah ee Bahamian, usbuuca tartanka waxaa ka muuqday dhowr waxyaalood oo xiiso leh, oo ay ku jiraan tartanka rasmiga ah ee Pro-Am ee Koorsada Golf ee Sandals Emerald Bay, halkaas oo 68 ciyaartoy ay ku tartameen wareeg 18-dalool ah oo ay ku weheliyeen lammaane Korn Ferry Tour. Ka dib tartankii Pro-Am, pro-golfer Tom Lewis kooxdiisu waxay ku qaateen dahabka Xafladda Abaalmarinta VIP-da oo lagu qabtay Kabo sumurud Bay iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradda Dalxiiska ee Bahamas, oo uu ka mid yahay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Mudane I. Chester Cooper.
Dhacdooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah rugta caafimaadka dhalinyarada ee gaarka loo leeyahay oo loo qabtay Nelson's Rangers, koox beeleed maxalli ah oo lagu taageeray dadaalka Sandals Foundation, garabka samafalka ee Sandals Resorts International. Waxaa marti galiyay Mu'asasada iyo Korn Ferry Tour pros, daraasiin caruur ah ayaa la baray sida ay u dhamaystiri lahaayeen dhaqdhaqaaqooda.
Tartanka rasmiga ah ee Korn Ferry Tour ayaa bilaabmay Axadii, Janaayo 16, iyadoo wareega ugu dambeeya uu soo gabagabeynayo Arbacada, Janaayo 19. Habka dhabta ah ee Sandals, jacaylku wuxuu ahaa magaca ciyaarta, isaga iyo saaxiibtiisa, Presleigh Schultz, 19 Akshay Bhatia oo jir ah ayaa loo magacaabay horyaalnimada 2022 ee Bahamas Great Exuma Classic ee Sandals Emerald Bay. Madaxweynaha Korn Ferry Tour, Alex Baldwin, iyo maareeyaha guud ee Sandals Emerald Bay, Jeremy Mutton, ayaa goob joog ka ahaa xaflada abaalmarinta.
Sii wadida dardargelinta, Sandals Resorts waxay ku dhawaaqday inay martigelin doonto Korn Ferry Tour 2023 Bahamas Great Exuma Classic ee Sandals Emerald Bay Janaayo 12-18.
Taageerayaasha Golf-ka ayaa hadda ballansan kara joogitaankooda usbuuca dhacdada 2023 oo ay daawadaan mustaqbalka xiddigaha PGA TOUR oo wata baasas daawadeyaal ah oo lagu daray martida Sandals. Waayo-aragnimada martida ee la xoojiyey ayaa dhawaan la heli doonaa si loogu daro boosas kasta oo cusub ama jira sidoo kale, oo ay ku jiraan xirmooyinka Pro-Am iyo VIP.
Naqshadeeyey Sandals Resorts 'Safiirka Golf Global, Greg Norman, Sandals Emerald Bay Golf Course waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay kan ugu dheer iyo mid ka mid ah 18-dalool ee ugu quruxda badan, iyo 72 koorsooyinka oceanside ee Kariibiyaanka, oo ku faanaya lix godad saxiix ah. Naqshadeynta koorsadu waa sawir gaar ah oo ah laba nidaam deegaan oo qurux badan halkaas oo sagaalka danbe uu soo bandhigayo biyaha xiisaha leh ee ku teedsan Exuma Sound iyo sagaalka hore oo muujinaya geedaha geedaha ee quruxda badan iyo godadka badda. Caan ku ah jidad carwooyinkeeda adag, dabaylaha ganacsiga ee jira ayaa u ballan qaadaya khibrado cusub oo ku saabsan ciyaar kasta.
Iyada oo sanadka oo dhan cimilo 80-degree ah iyo duulimaad toos ah oo ka fog dhowr magaalo oo xeebta bari ah, Sandals Emerald Bay waxay ku martiqaadaysaa martida inay is dejiyaan ka dib wareegyo leh hoy qaali ah, xeeb mayl dheer oo gaar ah, saddex barkadood oo dabaasha ah, 5-Star Global Gourmet ™ wax ka cunaya 11 maqaayado khaas ah, isboorti dhulka iyo biyaha aan xadidneyn, iyo - golf aan xadidneyn.
Iyadoo lamaanayaal badan oo aad u badan ay isla wada ciyaaraan xilliga fasaxa, Sandals Resorts ayaa hadda bixiya lix goob dalxiis oo loo dhan yahay Golf guud ahaan Bahamas, Jamaica iyo Saint Lucia, halkaas oo lamaanayaashu ay had iyo jeer ku raaxaysan karaan khidmadaha cagaarka ah ee dhammaystiran iyo tilmaamaha khabiirka ee rugaha golf-ka toddobaadlaha ah, marka lagu daro tas-hiilaadka ugu sarreeya ee tababarka. Dhawaan, Sandals waxay ku dari doontaa meel cusub oo golf ah faylalka galka iyada oo la furayo soo socda Sandals Royal Curacao gu'gan.
Si aad wax badan uga barato abaal-marinta Sandals Emerald Bay Golf Course, fadlan riix halkan. Si aad u ballansato joogistaada Sandals Emerald Bay, oo ay ku jirto 2023 Bahamas Great Exuma Classic ee Sandals Emerald Bay, riix halkan.
Dalxiiska Sandals® wuxuu bixiyaa laba qof oo jacaylka ugu jacaylka badan, Luxury Included® waayo-aragnimada fasaxa ee Kariibiyaanka guud ahaan 15ka goobood ee xeebta ee quruxda badan ee Jamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, iyo meel cusub oo 16aad ah oo imanaysa Curacao April 2022. Dabaaldegga 40 sano, shirkadda ugu weyn ee loo dhan yahay dalxiiska ayaa bixisa inclusions tayo badan oo ka badan mid kasta oo kale oo adduunka ah. Goobaha loo dalxiis tago ee Sandals waxaa ka mid ah saxiixa Love Nest Butler Suites® ee u dambeeya sirta iyo adeegga; dabeeto ay tababartay Guild of Professional Butlers English; Cas Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet™ cuntada, hubinta khamriga shelf-sare, khamriga qaaliga ah, iyo makhaayadaha gaarka ah ee gourmet; Xarumaha Aqua oo leh shahaadada PADI® khabiir iyo tababar; Wi-Fi degdeg ah xeebta ilaa qolka jiifka iyo sandaladaha aroosyada la beddeli karo. Sandals Resorts waxay dammaanad qaadaysaa martida nabada maskaxda ee imaatinka si ay ula baxdo Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, Tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee shirkadda ee la xoojiyey ee loogu talagalay in lagu siiyo martida kalsoonida ugu badan marka ay fasaxa ku qaadanayaan Kariibiyaanka iyo sidoo kale Hubinta Fasaxa Sandals-ka cusub, barnaamij ilaalinta fasaxa oo dhammaystiran oo muujinaya dammaanad-warshadeedka koowaad ee fasax beddelka bilaashka ah oo ay ku jiraan qiimaha duulista ee martida ay saamaysay Joojinta safarka ee COVID-19 ee la xidhiidha. Dalxiiska Sandals waa qayb ka mid ah Sandals Resorts International (SRI) ee qoysku iska leeyihiin, oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Dalxiiska Xeebta ee qoyska u janjeedha. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Farqiga Sandals Resorts Luxury Included®, riix halkan.
Caribbean Covid-19 Baashaal golf Jamaica Platinum Goobaha Sandals Dalxiiska Wi-Fi